Ellicott Taxanaha 470 Super Dragon® Dredge - Go'da Weyn ee Cutter Dredge
Taxanaha 4170 Super Dragon ™ Dredge
4170 Super Dragon red dredge waxaa ku qalabeysan laba makiinadood oo dul saaran oo awood u siinaya inay si madaxbanaan u xakameeyaan matoorka dredge iyo hayadaha hydraulic. Qayb weyn oo ka mid ah goynta qashin-qubka ayaa leh weel ballaadhan oo waardiye ah iyo koontaroolka koontaroolka dareenka leh oo ay weheliso nashqadeyn culus, naqshad culus oo loogu talagalay ka shaqeynta biyo mareennada xeebta.
Cabbirka siidaynta: 27 ″ x 24 ″ (700 mm x 600 mm)
Mashiinka ugu Weyn: 2,680 HP (2,000 kW)
Mashiinka Kaaliyaha ah: 1,410 HP (1,051 kW)
Awoodda Quwada Xoogga: 750 HP (550 kW)
Qoto Dheerida Ugu Badan: 58 ′ (17.7 m)
• Fadhida barafka
• Qalabka dayactirka lagu ridayo qalabka korantada
• Qiyaasta cabirka nuugista iyo siideynta
• Qalabka wax lagu xiro ee barafka lagu xiro meelaha barafka leh ee barafka lagu xiro
• Xulasho dheeri ah ayaa la heli karaa markii la codsado
4170 HALIS UGU DANBEEYA
• Aad ugu habboon yahay qandaraaslayaal dhumay.
• Waxaa lagu heli karaa sida dhisme-ka-dhismooyinka ama unug la qaadan karo oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqa gawaarida.
• Maalgashi raasamaal oo lagu kalsoon yahay oo loogu talagalay isticmaalka muddada-dheer.
• Loogu talagalay mashaariic culus oo duulimaad culus sida webiyada, dekedaha, dekedaha, iyo mashaariicda dib u soo celinta dhulka.